You’re Next (2011) – MM Subtitles
Video Sources 2491 Views Report Error
Did You Remember To Lock Your Door?Sep. 10, 2011USA95 Min.R
2011ခုနှစ်မှာထွက်ရှိထားတဲ့ “You’re Next” ကတော့ Horror, Mystery, Thrillerအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး IMDb rating 6.6 ရရှိထားပါတယ်။ဇာတ်အိမ်ကောင်းကောင်းနဲ့ လူသတ်ကားကြည့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ အကြိုက်တွေ့စေမယ့်ကားလေးလဲဖြစ်ပါတယ်။
ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ ဒါဗင်ဆန်လင်မယားနှစ်ယောက်က အငြိမ်းစားယူပြီးအေးအေးဆေးဆေးနေထိုင်ဖို့အတွက် ကျေးလက်အိမ်တစ်အိမ်ဆီကိုပြောင်းရွှေ့လာပါတယ်။ အဲဒီ့အိမ်နားမှာ အိမ်နီးနားချင်းဆိုလို့ အဲရစ်ဟာဆန်လို့ခေါ်တဲ့ လူကြီးတစ်ယောက်ရဲ့အိမ်ပဲရှိပါတယ်။
မနက်ဖြန်က သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ၃၅ နှစ်ပြည့်မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်လို့ သားသမီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ ဒရိတ်ခ်၊ခရစ်စပင်၊အေမီနဲ့ ဖီးလစ်တို့ဟာ သူတို့ရဲ့ချစ်သူတွေနဲ့အတူ ကိုယ်စီရောက်ရှိလို့လာပါတယ်။
မိသားစုစုံစုံညီညီနဲ့ ညစာစားကြနေတုန်း ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဒရိတ်ခ်နဲ့ခရစ်စပင်တို့က စကားများရန်ထဖြစ်ကြပါတယ်။အားလုံးရန်ပွဲကို အာရုံစိုက်နေကြတုန်းမှာ အပြင်ဘက်ကနေ ရုတ်တရက် ဒူးလေးနဲ့ပစ်ခတ်လိုက်တာကြောင့် အေမီရဲ့ကောင်လေးကိုထိမှန်ပြီး သေဆုံးသွားပါတယ်။
တိရစ္ဆာန်မျက်နှာဖုံးတပ်ထားတဲ့ လူသတ်သမားသုံးယောက်ကအိမ်အပြင်ဘက်မှာလဲ ထောင်ချောက်တွေဆင်ထားပြီး ဒါဗင်််််််််ဆန်မိသားစုဝင်တွေကို တစ််််ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ရက်ရက်စက်စက် လိုက်လံသတ်ဖြတ်ပါတော့တယ်။
အိမ်သားတွေအများကြီးရှိနေတာတောင်မှ လူသတ်သမားတွေက အိမ်ထဲကိုဘယ်လိုလုပ် အလွယ်တကူရောက်နေရတာလဲ….
အားလုံးကြောက်ရွံ့နေတဲ့အချိန်မှာသတ္တိရှိရှိနဲ့လူသတ်သမားတွေကို ရင်ဆိုင်ရဲတဲ့သူတစ်ယောက်လဲထွက်ပေါ်လာပါတယ်။သူကရော တစ်ယောက်ထဲဲနဲ့ လူသတ်သမားတွေကိုဘယ်လိုတိုက်ခိုက်နိုင်မလဲ….
ဒါဗင်ဆန်မိသားစုပစ်မှတ်ထားတိုက်ခတ်ခံနေရတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကရောဘာများဖြစ်မလဲ….ဆိုတာ အဖြေရှာရင်း ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ကြည့်ရှုခံစားလိုက်ကြပါဦး….
Original title You're Next
IMDb Rating 6.6 85,472 votes
Download 480p G Drive 250 MB
Download 480p Yandex 250 MB
Download 720p G Drive 403 MB
Download 720p Yandex 403 MB
Download 1080p G Drive 819 MB
Download 1080p Yandex 819 MB
Watch online 480p Yandex 250 MB
Watch online 720p Yandex 403 MB
Watch online 1080p Yandex 819 MB